★မြန်မာ့အလင်း★: လူလိမ်အကြွေးရှင်တွေကို မမုန်းပါနဲ့
နဒီယ (နအဖ၊ ဒီမို၊ တတိယလူ)တွေက အတင်းပြော အပုတ်ချ အဲဒါပဲလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင် တာဝန်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (၀ါ) ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ အဲဒီ တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေ/ အဖွဲ့အစည်းတွေကို အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ အပြစ်တင်ပြီးပြီဆိုရင်..ဇတ်လမ်းကပြီးသွားတာပါပဲ။ ပြဿနာကို နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ချပြမှုတွေမရှိပါဘူး။ အဲဒါကတော့ ငါနဲ့ သဘောထားမတူရင် ၇န်သူဆိုတဲ့ ကလေးစိတ်ကြီးကြောင့်ပါပဲ။ သဘောထားကွဲရင် ဒေါသထွက်တယ်။ ဒေါသတွေထွက်တော့ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းပြီး တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေ ကင်းမဲ့ကုန်ပါတယ်။ ဘာမှမတွေးနိုင်တော့ . . . စောက်တင်းတွေပဲ ပြောယုံပဲရှိတာပေါ့။
အခု Credit Card အကြောင်းပြသထားတဲ့ ဗီဒီယိုမှာဆိုရင် ဘဏ်တွေဟာ အတိုးကိုသူတို့ဖာသာ တိုးမြှင့်ပြီးကောက်ခံကာ လိမ်ညာလှည့်ပတ်နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ မသိနားမလည်တဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေကို credit card တွေပေးပြီး အကြွေးထဲနစ်အောင်လုပ်တယ်။ တရားဥပဒေဆိုတာလဲ သူတို့အသုံးတော်ခံပဲ ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ ရလဒ်ကတော့ ကျောင်းသားတွေ သတ်သေကြတယ်။ မိသားစုတွေ အိမ်ယာမဲ့တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ တကယ်ကို သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကျုပ်တို့ရဲ့ မြန်မာ့အလင်းဘလော့မှာ ဗီဒီယိုတွေအားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ . . . ဒီမိုအစိုးရတွေ မကောင်းဘူးတဲ့။ ဒီမိုဆေးရုံတွေနဲ့ ဒီမိုဆေးကုမဏီကြီးတွေကလည်း ကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့။ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ရဲတွေကိုလည်း မကောင်းဘူးဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နအဖကိုလည်း မကောင်းဘူးဆိုပြီး ပြော နေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေတယ်လို့ ပြောပြီး စစ်တပ်ကိုပါဖျက်ဖို့ တောင်းဆိုနေပါတယ်။ မြန်မာတွေမျှော်လင့်ထားတာက ဒီမိုဘက်ကို ဆန့်ကျင်ရင် နအဖဘက်ကို အကောင်းပြောစေချင်ပါတယ်။ အားလုံးကို အပျက်ကြီးပြောတာကို သဘောမကျပါဘူး။ တစ်ဖက်ဖက်ကို အကောင်းပြောဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တာတွေ မပြောပါနဲ့... ပထမဆုံး ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတွေကို လေ့လာပါ။ ခင်ဗျားအပေါ် ကောင်းတဲ့လူတွေ ရှိလား? ခင်ဗျားရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မတွေကရော ခင်ဗျားအပေါ် ကောင်းလို့လား? ခင်ဗျားရဲ့ အသိမိတ်ဆွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကရော လူကောင်းတွေ ဟုတ်လို့လား? နောက်ဆုံးဗျာ . . ခင်ဗျားကရော တခြားလူတွေအပေါ် ကောင်းလို့လား? အားလုံးဟာ ဟန်ဆောင်ပြီး ပြုံးတယ်.. ဟန်ဆောင်ပြီးကောင်းနေတာပဲ မဟုတ်ပါလားဗျာ။ အချင်းချင်းကူညီမှုတွေ မရှိကြပါဘူး။ မေတ္တာဆိုတာ သိပ်ကို ခေါင်းပါးနေတယ်။ လူလောကဆိုတာ လူသားတွေ စုပေါင်းပြီးမှ ဖြစ်လာတာပါ။ ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဟာ မကောင်းဘူးဆိုရင် . . . တခြားလူတွေကို ကောင်းဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ဒါ့ကြောင့် . . . Credit Card လိမ်နေသူတွေရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးမှာ အဆိပ်ခတ်သူတွေရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ လူသတ်နေတဲ့ အစိုးရတွေရှိတာလဲ မဆန်းပါဘူး။ ပရိုပိုဇယ်နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဒီမိုလုပ်စားတွေ ရှိနေတာလည်း မဆန်းပါဘူး။ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေ ၂၀၁၀ကို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်တာလဲ မဆန်းပါဘူး။
ကျုပ်တို့လူ့ဘောင်ကိုကြည့်ရင် ဈေးသည်တွေက အမြတ်ပဲကြည့်ပြီး ပစ္စည်းလိမ်ရောင်းတယ်။ ချမ်းသာသူတွေက ဆင်းရဲချိုတဲ့သူတွေအပေါ် မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ကလေးငယ်တွေကို လူမဆန်အောင် ခိုင်းတာတွေရှိတယ်။ အလုပ်သမားတွေကလဲ အလုပ်ရှင်အပေါ်မှာ စေတနာထက် သူတို့လစာငွေကိုသာ အဓိကထားတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုလည်း မကူညီကြပါဘူး။ မုဆိုးနားနီးရင် မုဆိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကင်းမဲ့သူတွေရဲ့ လူ့ဘောင်ထဲက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလဲ ကိုယ်ကျင့်တရားမဲ့သူတွေပဲဖြစ်နေမှာပါ။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့ လူ့ဘောင်ကပဲ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် . . ပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားပါ။ ဟန်ဆောင်ပြုံးနေ.. ဟန်ဆောင် သဘောထားကောင်းနေတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါကို ကောက်ကျစ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြီးရင် မိမိနဲ့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပါ။ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ကူညီကြပါ။ မတရားလုပ်နေတာတွေမြင်ရင် ၀င်ရောက်ဟန့်တားပေးပါ။ စစ်သားတွေက စစ်သားအချင်းချင်းမိုလို့ မတရားလုပ်နေတာတွေကို မသိဟန်ဆောင်နေရင်… မိမိအပေါ်ကို ဒီမိုသမားတွေက တရားသဖြင့်ပြုမှုဖို့ကို မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
ဒီမို..နအဖ.. ကချင်.. ကရင်. .ကယား .. မွန်.. ဗမာ.. ရှမ်း.. ခရစ်ယာန်.. ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေကိုကြည့်ပြီး မမုံန်းကြပါနဲ့။ (မွတ်ဆလင်ကိုတော့ မုံန်းရပါမည်) နေရာတိုင်းမှာ လူဆိုးလူကောင်းရှိပါတယ်။ မေတ္တာတွေပြည့်နှက်တဲ့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်ဖြစ်အောင် အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့် ကူညီကြပါ။ ကျုပ်တို့တွေ လူကောင်းဖြစ်နေမှ... ကျုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမြင်မတူတဲ့သူတွေအပေါ် . . ဦးသန်းရွှေလို လမ်းပေါ်မှာ ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်နဲ့ပြစ်သတ်တာတွေ . . . ဒီမိုသမားတွေလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောက်တင်းပဲပြောတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ အဏာရလာမှာကို ပူပင်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ ကျုပ်တို့ဆောင်းပါးမှာ စကားလုံးလှလှတစ်ခုမှ သုံးမထားပေမယ့် . . . လက်တွေ့ကျရဲ့လားဆိုတာလည်း စဉ်းစားပေးကြပါဦး။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:18 AM
min dot lote tar lat tway kya lar so dot ... kya dal lay kwar ..phar thal ma thar pi tha jaung pya dar lat tway sout yan kya dar pop kwa!
lu lu chin lay sar ya mhan ma thi .. bar thar char chin lay zar ya mhan ma thi ... ka lar nat bean trading lote pee pae shone lo ka lar mone ..thein kyone out tan kya nay dat russia pyan sit kway dway ... sout yan lat tway kya dal .. kway loe ma thar sit sit kyi myarapyit gone u bar jaung ... mhat tan tin at par dal kha myarrrr !!!
hahahaha ..phar thal ma thar sit kway dway ..ka lar nat paung pee pae export lote tar ..pae shone loe ..bangkok htwat pyay nay ya lo ..ka lar mone nay shar dar .. min dot lal wut pae kwar naw !!
ma kaung dar dway jee lote tot min dot ta nay ..kan gyi htiek tar ma san bar boo kwar !!! hahahaaha